KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Baarlamanka oo Sameeyay 15-gudi oo Joogto ah
Wednesday 2 January 2013 17:36
Baarlamanka oo Sameeyay 15-gudi oo Joogto ah
Muqdisho (KON) Kulanka mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamanka Mudane Mahad Cabdala Cawad waxaana soo xaariday oo kooramka buuxiyay 176 mudane.
Kulankaan ayaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya waxay kaga doodayeen samaynta gudiyo uu yeeshe baarlamaanka waxaana mudanayaasha baarlamaanka ugu danbayntii ay isku raaceen in la sameeyo 15-gudi.
Gudiyada la sameeyay ayaa waxaa ka mid ah, gudiga dib u eegista iyo dhaqan galinta Dastuurka, gudiga maaliyada iyo la xisaabtanka miisaaniyada qorsheynta iyo iskaashiga caalami ah, gudiga xaqiiqo raadinta dib u eegista iyo hanti soo celinta iyo gudiyo kale.
Mahad Cabdala Cawad guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamanka ayaa ku dhawaaqay in codka gacan taaga ah oo ay sameeyeen xildhibaanada ay ogolaadeen 167, 6-na ay diiday halka 3-na ay ka aamuseen.
Maalinta Sabtiga ah ayaa waxaa la gali doono doorashada guddoomiyayaasha iyo kuxigeenada gudiyada baarlamaanka ee maanta leesku raacay.